ကျေးဇူးပါ Admin | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » ကျေးဇူးပါ Admin
Posted by etone on Nov 25, 2010 in Letter to The Editor | 22 comments
အနည်းငယ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့မန္တလေးဂေဇက်ရဲ့ application tools တွေအကြောင်း
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်း အပြင်က မန်ဘာမဟုတ်ပဲဝင်ရေးတဲ့လူတွေကြောင့် ပို့စ်ပိုင်ရှင်တွေအတော်လေး စိတ်ပျက်၊ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် မန်ဘာမလုပ်ပဲ ၀င်မန်းလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့နေရာလေး အခုပျောက်သွားတော့ တော်တော်လေး ကောင်းသွားတယ် ။ အရင်လိုပဲ တို့ရွာလေးတစ်ခါ ပြန် ငြိမ်းချမ်းပြန်ပြီပေါ့ ။
နောက်တစ်ခုကောင်းတာက အရင်က ကိုယ့်ပိုစ့်မှာလာမန်းရင် လာမန်းတဲ့လူရဲ့ email address ရယ်၊ nick ရယ်ပါတယ် …ip address တောင်ပါသေး ။ဘာမန်းလည်း အကြောင်းရာလေးလည်း ပါတယ်ပေါ့ ..။ အဲ့ဒါက privacy မရှိပါဘူး ။ လာမန်းတဲ့ လူရဲ့ email address ကို ပို့စ်ပိုင်ရှင်က သိနိုင်တာကြောင့်ပါ..။ အခုတော့ ကောင်းပါတယ် လာမန်းတဲ့လူရဲ့ email adress ကို မသိနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာလေး တစ်ခု တော်တော်ကောင်းပါတယ် ။
သို့သော်လည်း … ဘယ်သူလာမန်းလဲဆိုတာလေး ပါမလာပါဘူး ..အဲ့ဒါလေးပါလာရင် ပိုကောင်းမှာပါ … ။ အခုတော့ ပို့စ်ပေါ်မှာ မန်းတာတစ်ခုရှိတာသိရတယ် ..မန်းတဲ့ အပြည့်စုံလည်းသိရတယ် သို့သော်… ဘယ်သူကများမန်းပါလိမ့်သိချင်ရင် ကိုယ့်ပို့စ်ကိုယ် ပြန်ဝင်ကြည့်ရပါတယ် … တောင်းဆိုပါတယ် မန်းတဲ့လူနာမည် / nick လေးလည်း ၀င်လာတဲ့စာမှာ ပေါ်အောင်လုပ်ပေးပါဦး ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
အင်း ဟုတ်တယ် etone ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ် . ကိုယ်ပို့စ်ပေါ်မှာ ဘယ်သူကများမန်းပါလိမ့်ဆိုပြီး သိချင်တော့ ပို့စ်ကို ပြန်ပြန်ဖွင့်ကြည့်နေရတယ် အခုတစ်လော လိုင်းကလဲ မကောင်းတာနဲ့ဆိုတော့ တစ်ခါကြည့်ဖို့အရေး တော်တော်လေး စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်နေရသေးတယ် .. ဖြစ်နိုင်ရင် မန်းတဲ့လူနာမည် / nick လေး ပါအောင်ပြန်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ် ….
သိပ်လဲအထင်မကြီးနဲ့ကိုအီတိုးကြီးရေ အဲဒီနေ့က ရေးခဲ့တဲ့ဆရာရမ်းကုဆိုတာကျွန်တော်ဘဲ။ ဒီဆိုဒ်ကဝင်ရတာအရမ်းနှေးလို့အမြန်လိုတာနဲ့ ဒီတိုင်းဘဲရေးခဲ့တာ။ လူတွေသန်းရာနဲ့ချီပြီးသုံးနေတဲ့ facebook တောင် lon in ဝင်ရင် ဒီလောက်မကြာဘူး။ ဒီဆိုဒ်ကအရမ်းကြာတယ်။ အဲဒါကြောင့်အမြန်လိုလို့ရေးခဲ့တာ။အမှန်တွေရေးတာများသွားတော့ ဖျတ်တာပေါ့ဗျာ။ ဆရာဝန်တွေသိပ်ကောင်းတယ်ပေါ့ ဟုတ်လားကိုခိုင်ရေ လို့သာမေးချင်တယ်ဗျာ။ ကိုယ်တိုင်ခံစားရမှဘဲသိကျမှာပေါ့။
ကြာတာကတော့ အမှန်ပဲ ရမ်းကုရေ ။ မန္တလေးဂေဇက်က တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း အမြန်သုံးလို့ရအောင်လုပ်ပေးမှာပါ ။ မနက်မိုးလင်းတိုင်း gmail အပြင်အရင်ဆုံးဖွင့်မိတဲ့ဆိုက်ဆိုတော့ သံယောဇဉ်ဖြစ်နေတာနဲ့ မငြီးမငြူပဲ refresh button လေးနှိပ်မိနေတာ ။
ရမ်းကုကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးတာမဟုတ်ပေမဲ့ တည့်တည့်မှန်သွားပါလား ။ရေးတုန်းက အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းပြီး ပထွေးဖအေတော်ချင်နေတဲ့ကောင်တွေကိုပြောတာ။ ။ နိုင်ငံရေး ဆိုက်တွေမှာ တွေ့ပါလိမ့်မယ် ။
ရမ်းကုရေ …..စိတ်ထဲမကျေနပ်တာလေးတွေရှိသော်လည်း …. ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း တွေက ရှောင်လွှဲလို့မှမရပဲ သွားနေရတာပါပဲ ။ ရမ်းကုက ဆရာဝန်တွေကိုစိတ်နာနေတာနဲ့ ဘယ်လောက်နေမကောင်းဖြစ်ဖြစ် ဆေးခန်းမသွားတော့ဘူး လား … ။ ဒီလိုလည်း မဟုတ်ဘူးလေ … သူတို့အမှားအယွင်းကြောင့်လူနာတွေခံခဲ့ရတာရှိသလို ၊ သူတို့အသက်ကယ်ပေးထားတဲ့လူနာတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ် ။ ကိုယ့်အလှည့်ကျမှဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့လည်း ဘယ်လိုပြောရမလဲ ၀ဋ်ကြွေးပါခဲ့တယ်လို့ပဲ စိတ်သက်သာရာရအောင်မှတ်ထားလိုက်ပါ ။ (တကယ်အမြက်မဖြေနိုင်သေးရင်လည်း သက်ဆိုင် တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရန်သွားတွေ့ပေါ့)ဒါပေမဲ့လည်းရမ်းကုရေ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက်ကိုယ်မပျက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် ။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပြောလည်းဒီစကားပဲ ၊ မိုက်၂ရိုင်း၂ပြောလည်း ဒီစကားပဲဆိုပေမဲ့ ယဉ်၂ကျေး၂ပြောတော့ နားထောင်ရကောင်းတာပေါ့ ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် မိုက်၂ရိုင်း၂ပြောတတ်လို့ပြောတာ မရဘူးလား ဆိုလည်း ရတော့ရတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ လူမုန်းခံရတာပေါ့ ။ အမွှာတွေတောင် တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ချင်းမတူပါဘူး ။ လွတ်လပ်စွာကွဲလွဲနိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ နှစ်ဘက်မျှတွေးပြီးနားလည်ပေးတတ်ရင်ပဲ တော်တော်လေး နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းနေပါပြီ
ကျုပ်ကတော့ … ဘယ်သူ .ဘယ်ဝါဆိုတာ.. အိုင်ပီ။ အီးမေးလ်။ လော့ဂ်အင်အချိန်တွေမြင်နေရတာမို့ .. သိပါတယ်..။
သိဆို… ဆဲလ်ဖုန်းမှာတောင် ..ဆက်တင်လုပ်ထားတယ်လေ..။( အဲဒီလောက်တောင်အလုပ်လုပ်တာနော..)
ပထမပြောရမှာက.. etone က..အမျိုးသမီးပါခင်ဗျ..။ သူ့စာတွေလည်းသေသေချာချာဖတ်ပါဦး..။
ဒုတိယတခုက .. ဖေ့စ်ဘုတ်က .. တလ ဒေါ်လာ ၄-၅သန်းသုံးနေတာဗျ..။ မန္တလေးဂေဇက်က တလ ၃-၄ရာနဲ့ဘယ်တူပါ့မလဲ..။ ကြာတာလေးတော့ ခွင့်လွှတ်နော..။
ခင်ဗျားရဲ့ … ကောမန့်ဖျက်တာမှာ .. ဆရာဝန်တွေ ကောင်းတာမကောင်းတာထက်… လူတွေဖတ်ရခက်တဲ့ ဆဲစာတွေပါလို့..တိုင်စာရလို့ ဖျက်တာပါခင်ဗျ..။ သေသေချာချာသာဆွေးနွေးပြီး အချက်အလက်နဲ့သာေ၇းပါ..။ သတင်းစာမှာပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့တောင် စဉ်းစားပေးနိုင်ပါတယ်..။ ဒါက မီဒီယာရဲ့ အလုပ်ပဲ..။
ဆရာဝန်တွေသိပ်ကောင်းတယ် မကောင်ဘူးဆိုတာထက်.. နေမကောင်းရင်တော့ ..ဆရာဝန်ပြရမှာပဲမို့ ..
ဆရာဝန်အားလုံးသိမ်းကြုံး..အပြစ်ပြောနေရင်..တော်ကြာ..နေမကောင်းလို့သွားပြ၇င်… အပ်ကြီးကြီးနဲ့..ထိုးထည့်လိုက်မှ ..ဒုက္ခ..။
Last year, TechCrunch reported that Facebook spends $1 millionamonth on electricity, $500,000amonth on bandwidth, and up to $2 million per week on new servers to keep up with its users’ insatiable photo-uploading needs.(April 16, 2009)
သဘောကျခြင်း မကျခြင်း သဘောတူခြင်းမတူခြင်း
ပိုက်ပိုက်ရှိ ရှိ မရှိရှိရှိ
ရောဂါ နှင့် ဆေး
ဆေး နှင့် ရောဂါ
ဆရာဝန်ပေါ် မူတည်သည် ။
လူနာ … ။
အကုမှန်ဖို့ လိုအပ်သည် ။ ။
ညွန့်အေး ( အင်းဝ )
ဆေး ( ၁ ) ရန်ကုန်
၂၀၀၂ – ခုနှစ် ။
ရွာထဲကို ဟိုတလောက သောင်ကျန်းသူအစုတ်ပလုပ်တွေ လေးခွတကားကားနဲ့ဝင်တယ်လေ … အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါက်တာတွေမြို့တက်ပြီး ခဏရှောင်နေတာဖြစ်မယ်
မြို့ရောက်ရင် ပြောလိုက်စမ်းပါတော် … ။ တို့ရွာကြီးအေးချမ်းသွားပါပြီလို့ ရွာသူကြီးက တစ်ခါမှအသုံးမပြုရသေးတဲ့ နှစ်လုံးပြူးသနပ်ကြီးထုတ်ပြီးချိန်ယုံပဲရှိသေး သောင်းကျန်းသူ ၊ ပထွေးအဖေတော်ချင်တဲ့ကောင်တွေ မရှိတော့ပါဘူးဆိုတာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းပျောက်နေတဲ့ Mr.Dr ရော ၊ Ms.Dr ရော ကိုပြောလိုက်စမ်းပါတော်။
အီးတုံးလေး မသိတာ တခု ရှိတယ် ရွာသူကြီး တခါမှ မသုံးရသေးတဲ့ နှစ်လုံးပြူးကြီးက.. မသုံးလို့ သံချေးတက်နေတာ.. ခလုပ်ဆွဲလို့ ထွက်မှာ မဟုတ်ဘူး.. သံချေးပိတ်နေလို့.. ဘယ်သူမှ မပြောနဲ့နော်.. တိုးတိုး တိတ်တိတ် လက်တို့တာ။
အီးတုံးနဲ့ ဆူး ဘယ်သူကပိုကြီးသလဲ။
ကိုယ့်စိတ်ထဲ အီးတုံးက ပိုကြီးတယ်ထင်နေတာကို ဆူးက အီးတုံးလေးဆိုတော့ နည်းနည်း တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။ တကယ်တော့ ဘယ်သူ့အသက်မှ မသိပါဘူး။
စိတ်ထဲထင်တာပါပဲ။( စာတွေဖတ်ရင်း မှန်းကြည့်မိတာထင်ပါရဲ့)
အီးတုံးက မဆူးထက်3နှစ်နီးပါးငယ်တယ်လေ အသက်ရှစ်ဆယ့်သုံးနှစ်ရှိတဲ့အန်ကယ့်ရဲ့ ။
အီးတုံးလေး က ဆူးရဲ့ နှမတော်လေးပါ.. ဆွေမတော် မျိုးမတော် အတင်းတော်ထားတဲ့ နှမတော်.. ဟုတ်တယ်မလား နှမတော်
န နှ နှ
ဆူးက မိန်းကလေးမဟုတ်ပဲ ဆူးကြီးနဲ့ ဆူးအစစ်ထင်ပါရဲ့။
ဟဲ့.. ဘယ့်နှယ့်.. ဘာထင်နေတုန်း.. လင်းဝေကျော်နော်.. ၁၀တန်အတွေးမှာ အခြောက် ကိစ္စ မြှောက်ပေးလို့.. အခြောက် တိုက်ဖျက်ရေး ရေးပေးတာတောင် အခြောက်ထင်နေလား
အော်..သူတို့ရွာလေးက အဲ့လိုလေးလား…တို့က လူသစ်ပါ။facebook က၀င်လို့ရတယ်ဆိုလို့ ၀င်ကြည့်တာပါ….ဒီရွာက ကြိုဆိုကြလား မသိနော်။
ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ၊ ဓာတ်ပုံမမြင်ခင်ကထဲက ရင်ထဲက ကျလိကျလိနဲ့ကို စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပါ။ ကြုံလို့ပြောရအုံးမယ်။ ရွာထဲမှာ လူရှုပ်လူပွေတွေ ပေါတယ်၊ နာမည်တွေကိုက ခိုင်တာ ပုတာ ပေါက်တာ နီတာ ဝတာ လန်တာ ကွီးတာ အိုအစုံပါပဲ။ သူတို့လာပြီး အဆက်အသွယ်လုပ်ရင် ပြန်မခေါ်နဲ့နော်။ အလိုက်ကမ်းဆိုး သိတတ်မှု မရှိကြဘူး။ လိုအပ်တာရှိ ကိုကြောင်ကြီးကို အရင်ပြောနော်၊ ကွန်းမန့်နဲ့ မဟုတ်ဘဲ ရွာထဲကနေ အချင်းချင်း စာပို့လို့ရတယ်။ စာမျှော်နေမယ်။
နှစ်သစ်နှင်းဆီအငြိမ့်ထဲက မိုးမိုးလိုဖြစ်နေမယ် သတိထား ဦးကြောင်ကြီးရေ~~
(Ai လဲသတိနော်) BD
ဟာဗျာ … ကိုကြောင်ကြီး @ ကိုကြီးကြောင်တို.ကတော့လုပ်ပီ …
အပေါ်က အချစ် (Ai) မမရေ …
ကိုကြောင်ကြီး @ ကိုကြီးကြောင် ပြောတာကို အဟုတ်မှတ်ရင်တော့ အပါး ၁၀၀ မှောက်မရ်နော် …
သူ.ကြောင့် ကောင်မလေးတွေ ပခုံးနဲ.နှပ်သုပ်ရတာတော်တော်များနေပီ …
My name is Mon Mon. says:
မွန် ကတော့ ဒီဆိုက်မှာ ၀င်ဖတ်တာ သိပ်တော့ မကြာသေးပါဘူး။
၀င်ကြည့်တော့ ဒီဆိုက်လေးက သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်။ ဗဟုသုတလည်း ရတယ်။
လူလိမ္မာ များ ခိုးခိုး မိုက်ခဲ့သလို
လူမိုက်များလဲ တိုးတိုးလေး လိမ္မာခဲ့ဖူးပါတယ်